Apple iri kusundidzira vatengesi kuti vateme yavo margin margin IPhone nhau
Iyo Cupertino-based kambani haina kumbobvira yazivikanwa nekupa ayo mariza nemitengo yakaderera. Muchokwadi, gore rega rega nechikonzero chekuchinja kwemari, anogara achikwanisa kukwidza mutengo wemamodeli matsva aanotangisa pamusika. Dambudziko nderekuti ichauya nguva yekuti vashandisi vafunge kaviri pavanomutsiridza chishandiso gore rega kana makore maviri ega uye nekuwedzera nguva yekushandisa, kunyanya iyo iPhone. Kunyanya kubva kuvhurwa kweiyo iPhone 6 Plus, ndakafunga kuzvidyara ndoga nekuvandudza iyo terminal kanenge makore maviri ega ega, kubvira pIni ndinobata 1000 euros gore rega rega mbozhanhare, ndinonzwa kunge benzi, zvisinei kuti unoitarisa kupi.
Zvinotaridza kuti muCupertino vane hanya nezvekutengesa zvakaderera izvo zvishandiso zvavo zviri kutambura pakutanga kwegore, kupi chimwe chezvikonzero zviri pachena ndiwo mutengo wema terminals. Iyo kambani inoziva izvi uye inoita kunge inoda kuchengetedza kana kudzikisa mutengo wavo zvishoma. Sekureva kwaDigittimes, Apple iri kusundidzira vatengesi kuti vaedze kudzikisa mutengo zvakanyanya sezvinobvira kuitira kuti zvinhu zvavanoita zvidhure.
Pakati pevatengesi vanobatwa zvakanyanya nedzvinyiriro iyi tinowana Foxconn naPegatron, asi havazi ivo chete, nekuti vamwe vatapi vadiki varipasi pekumanikidzwa nekambani kuyedza kudzikisa mutengo wekugadzira wechinhu chimwe nechimwe kusvika pakakwirira.
Apple iri kuwedzera huwandu hwevanopa kutsvaga iyo inopa yakanakisa mhando pamutengo wakagadziridzwa. Ngatitarisirei kuti kambani inoedza kudzikisa mutengo wechigadzirwa chayo, iyo iPhone, kuyedza kugadzirisa mutengo wezvinhu uye kusashandisa zvakachipa zvinhu pane munguva pfupi, chinhu chete chavachatipa ndezvekushanda matambudziko mune edu zvishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Apple iri kusundidzira vatengesi kuti vacheke yavo margin margin
Apple iri kusvina vanotengesa here? Ini ndinofunga mhinduro yacho haisi iyo ... Mhinduro ndeyekuti ivo pachavo vanosimbisa homwe dzavo uye zvakawanda, kuti ivo vakapfuma kwazvo papasi, ndezvekuti hunhu hwangu hunondibata zvakanyanya! Zvinodhura zvakadii kugadzira iPhone? 200 pamazana mazana matatu emadhora, ndinovimba gore rino .. Chengetai mitengo, nei maona zvandakaona .. Ichave yakafanana dhizaini ne300 mamwe mabhuru, kana vakwidza mutengo .. Ehe saizvozvo kuitira kuti vanhu rega kutenga iPhone, hongu kwete .. Iyo 3 inodhura seMacBook .. Zvinonyadzisa zvikuru! Ini ndinongoda kuona iyo "iPhone pro" nemitengo yeguhwa uye hongu hongu hongu, shanduko shanduko.
Ndinobvumirana zvachose naJosé. Ndakatenga iyo yekutanga iPhone ya2007 muUSA mazana mana emadhora uye yaive mudziyo wemberi. Kubva ipapo haina kumira kukwira mumutengo kusvika nhasi 400 ndiyo yakachipa asi inogona kudhura kusvika ku700! Ngatizvitarisei, zvakafanana nebhuku rakanaka chaizvo! Ini ndinonzwa sekunge makambani anotora mukana wefoni (Samsung ine mitengo yakafanana). Ndinovimba mujaho unotanga kudzikisa mitengo sezvo ivo vari kusvika pahunhu izvo zvinoita kuti isu tishandure nharembozha yedu makore maviri kana matatu ...
akadaro iPhone akadaro
Mmm…. Vakuru !? Ini handizive nezvako, asi vanhu vandinoziva havachinje iyo iPhone kusvika yafa nekukanganisa kwakanyanya, ini ndinopa muenzaniso, ndichiri kushandisa iyo iPhone 4 nekuti ini handisati ndaona iyo iPhone inoita kuti ndifunge, nekuti uyu mutengo iwo mhando uye masevhisi ayo akakosha kutenga, HAPANA vanababa, kwemakore izvo zvauri kutaura vanhu hazvichinje gore rega rega, zvandinofanira kutaura, kune vanhu vanozviita, asi kwandiri ibenzi chinhu , ramba uchifunga kuti nharembozha Haisi chishandiso chaunotenga, asi nekusaziva chinhu chakakosha muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, kana ikashaikwa tinotomanikidzwa kutenga imwe (kana tisina mari uye isu tinoda imwe isu tinomanikidzwa kutenga imwe ine hunhu husinga gadzikane asi zvirokwazvo ivo vari nani pane avo vatakange tiinayo neiyo yapfuura iPhone).
Ini handifarire uyu modhi (nekuti chinofanirwa kuve rudo pakutanga kuona kubhadhara € 1000) .Ndiri kuzowedzera hupenyu hweangu iPhone 4 rimwezve gore.
Saka pane vashoma vanoshandura maPhones gore rega rega, seyakajairika mutemo vanochinja ese matatu makore mashoma. Kana iwe wakabhadhara iyo muna 3 € 2013 (approx kutaura nhamba) izvi zvingave kuti mumakore matatu iwe wakadzora michina sekunge une rendi ye € 768 pamwedzi.
Tichitarisa seizvi, kana vakakuudza kuti kana uchida foni yaunoda, unenge uchizobhadhara mushure memakore matatu, € 3 vazhinji vangave vachida, asi kana vakaudzwa kuti vakatenga iPhone 22S ye € 6 (kutaura nhamba) uye kuti vari kuzobhadharira imwe modhi gore rino, zvinoreva kuti vakabhadhara maeuro makumi masere pamwedzi ayo anozodzikiswa chete kana zvichikwanisika kuti vatengese ruoko rwechipiri vodzoserwa mari .
Zvino, ndanga ndichichengetera makore mashanu kuti nditenge iyo inotevera iPhone, asi kana ndisingazvifarire kana mutengo uchikwira, ndinogona kutenga iyo iPhone 5S, iyo inonyatso kudzikisa mitengo nechishandiso chichagara kune imwe Makore mana kana mashanu. Hahaha
Pindura kune talesiphone
Handizive kana zvichakurumidza kupfuura kumberi, asi hapana kambani yanga iri pamusoro zvachose.
Kana ndikaona iro zuva, (iro ini ndine chokwadi chekuti ndichaona pamwero uno), handifare. Asi pakupedzisira ndichave nechokwadi chekuti avo vanomhanyisa makambani vanhu uye isu tatoziva kuti isu vanhu tinotadza.
Izvo zvinoshamisa, vachazove neyakaomarara chiso?
Asi izvo ndezvekuti ndinofungidzira here, zviri sei kuti iwe uvandudze gore rega kana makore maviri ega ega? Izvo zvakanyorwa kupi? Mazuva ese ini ndinoshandisa iphone 3gs uye 4s ese anoshanda akakwana sezuva rekutanga. Sei gehena ndiri kuzoda kuvashandura? Nei uchichinja chimwe chinhu chinoshanda? Dhizaini? Usandinetse! Kana ndakavatengera ka1 nguva yaive chaiyo nekuti ndaifarira dhizaini yavo. Uye zvakare, kune zvifukidziro, vinyl uye makesi miriyoni anodhura pane kushandura nharembozha yako kune avo "vanonetseka" nezve dhizaini yebhuruu ...
Yangu ipad mini 1gen Ini ndichiri kuishandisa irinenge zuva nezuva, chete mune ino kesi nekuda kwemawebhusaiti akagadziriswa / akagadzirwa mawebhusaiti kana chero chinhu, ini ndakabata iyo ipad mini 4 kuti ndikwanise kufamba zvakadzikama ndisina kuvhara mapeji ese maviri matatu. Kana zvisiri, ini ndaizoenderera nekuishandisa sezvazviri mazuva ese.
Kune vamwe vese, hazvina musoro kuti uchinje nharembozha yako senguo dzezhizha.
Mushure memakore mashanu ndatenga iyo iPhone 5s iyo inondigarira inokwana makore mashanu kana kupfuura. Uye kana iyo 6gs ne5 dzichitsamwa uye dzisingakwanise kuitora futi, ndichafunga kutenga iphone yavanotengesa panguva iyoyo ...